Haddii uu David Alaba ku biiro Kooxda Real Madrid, miyuu heli doonaa Mushahar ka badan midka uu qaato Kabtan Sergio Ramos? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
May 3, 2021 at 13:37 Haddii uu David Alaba ku biiro Kooxda Real Madrid, miyuu heli doonaa Mushahar ka badan midka uu qaato Kabtan Sergio Ramos?2021-05-03T13:37:37+02:00 CAYAARAHA
(Madrid) 03 Maajo 2021. David Alaba ayaa la soo warinayaa inuu heli doono Mushahar sare oo la mid ah midka uu helo Kabtan Sergio Ramos, marka uu ku soo biiro xagaagan Kooxda Real Madrid.
Daafacan boosaska badan ka ciyaara ee Alaba ayaa horraantii xilli ciyaareedkaan ku dhawaaqay inuu dhammaadka xilli ciyaareedkaan soo gabagabeynayo 13-sanadood oo xiriir ah oo uu la qaatay Kooxda Bayern Munich.
Real Madrid ayaa ah kooxda ugu cad-cad inay xiddigan kula soo wareegto beeca xorta ah, iyadoo la sheegayo inuu heshiis horey u dhex maray labada dhinac.
Sida laga soo xigtay khabiirka dhanka suuqa kala iibsiga xiddigaha ee Fabrizio Romano, Alaba waxaa la siin doonaa qiyaastii 12 milyan oo euro oo u dhiganta 10.44 milyan oo gini xilli ciyaareedkiiba oo ay canshuurtu bannaanka ka tahay, taasoo si wax ku ool ah u dhiganta mushaharka Ramos.
Taasi waxa ay ka dhigeysaa ciyaaryahanka xulka qaranka Austria inuu noqdo ciyaaryahanka saddexaad ee ugu mushaharka badan Real Madrid, waxaana uu ka dambeeyaa kaliya Eden Hazard iyo Gareth Bale, kuwaasoo qaata xilli ciyaareedkii mushahar dhan 15 milyan oo euro oo u dhiganta 13.1 milyan oo gini.
Mustaqbalka Ramos ayaan wali hubin, waxaana laga yaabaa inuu ku sii jeedo koox kale marka dib loo furo suuqa kala iibsiga xiddigaha, walow uusan wali si rasmi ah heshiis ula gaarin Los Blancos, isla markaana uu xor u yahay inuu la hadlo kooxaha Ajaaniibta ah.
« Jubaland oo caddeysay mowqifkeeda ku aadan shirka uu iclaamiyey Rooble, kana dalbatay hal qodob
Sawirro: Farmaajo oo aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee Ethiopia »